स्वस्तिमा, केकी र ऋचाले ‘लभ स्टेसन’ हेरेर के भने ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
स्वस्तिमा, केकी र ऋचाले ‘लभ स्टेसन’ हेरेर के भने ?
शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङ स्टारर चलचित्र ‘लभ स्टेसन’ ले हलमा दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ । चलचित्रको व्यापारबाट सन्तुष्ट रहेको निर्माता गोविन्द शाहीले बताएका छन् । सोमवार साँझ चलचित्र हेर्न राजधानीको बिग मुभिजमा अभिनेत्रीहरुको भीड देखिएको थियो ।
अभिनेत्री त्रय स्वस्तिमा खड्का, केकी अधिकारी, ऋचा शर्मासँगै निर्देशक विशाल भण्डारी, अभिनेता गजित विष्टलगायत चलचित्र हेर्न हल पुगेका थिए । ‘प्रेमगीत २’ मा समावेश चर्चित गीत ‘मोटरसाइकलमा’ गीतमा अभिनेता प्रदीपसँग स्क्रिन साझेदारी गरेकी अभिनेत्री स्वस्तिमाले चलचित्र राम्रो लागेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘चलचित्र रमाइलो लाग्यो । प्रदीप र जसिता दुबैलाई क्यूट देखिएको छ’,चलचित्रको राम्रो पार्ट बताउँदै उनले भनिन्, ‘दुईको केमेस्ट्री राम्रो थियो । कतिपय ठाउँमा सोच्दै नसोचेको सस्पेन्स पार्ट पनि राम्रो लाग्यो ।’ उनले चलचित्र हेरिरहँदा इमोसनल भएको पनि बताइन् । उनले ‘प्रेमगीत ३’ अफर भएको हल्लाबारे पनि स्पष्टिकरण दिइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म अफर आएको छैन । अफर आयो र स्क्रिप्ट मनपर्‍यो भने गर्नेछु ।’
अभिनेत्री केकीले पनि चलचित्रको तारिफ गर्न कञ्जुस गरिनन् । ‘चलचित्र एकदमै राम्रो लाग्यो’, छेवैमा रहेका प्रदीप र जसितातर्फ हेर्दै उनले भनिन्, ‘यति राम्रो-राम्रो अनुहार देख्न पाउनु मेरो लागि त ‘आइ प्लिजिङ’ । म एकदमै इमोसनल पनि भएको थिएँ ।’ उनले चलचित्रको कन्टेन्ट र कलाकारको अभिनयले आफूलाई आकर्षित गरेको बताइन् । उनले अगाडिको केही भाग छुटेका कारण फेरि हेर्ने वाचा गरिन् ।
भर्सटायल अभिनेत्री ऋचाले भने जसिताको अभिनय र सुन्दरताको तारिफ गरिन् । उनलाई आफूले साक्षात परी देखेको ऋचाले बताइन् । ‘जसिता नेपाली चलचित्रकी सबैभन्दा क्यूट अभिनेत्री हुन् । उनको चलचित्रमा काम पनि उतिक्कै राम्रो छ । प्रदीपको पनि मनपर्‍यो । चलचित्र हेरुन्जेल रमाइलो छ’, उनले भनिन् । निर्देशक भण्डारी र अभिनेता गजितले प्रदीप र जसिताको केमेस्ट्री र चलचित्रको छायांकन पक्षको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।
सेलिब्रेटीहरुको प्रतिक्रिया सुनेपछि दंग देखिएका प्रदीपले देशभर चलचित्रले राम्रो व्यापार गरिरहेको र हलसम्म आएर फिल्म हेरिदिन दर्शकलाई अपिल गरे । उनले दर्शकलाई चलचित्र युट्युबमा नकुर्न पनि आग्रह गर्छन् । उनले भने- ‘हामीलाई तपाईंहरुको साथ युट्युबमा होइन हलमा चाहिन्छ । तपाईंहरुको साथ-सहयोगले हामीलाई भोलीका दिनमा झन् राम्रो काम गर्न हौसला मिल्छ ।’ यो चलचित्रलाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् ।